‘ओली सरकार परिक्षामा पासमात्रै भयो’: डा. भट्टराइ « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १ सय दिन पुरा गरेको छ । नयाँशक्ति पार्टी नेपालले ओली सरकारलाइ पासमात्रै भएको बताएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइले ओली सरकारको १ सय दिनको मुल्यांकन गर्दै पास अंकमात्रै प्राप्त गरको बताएका छन् ।
आज उनले ट्विट गर्दै उनले सरकारको मुल्यांकन गरेका हुन् । उनले सरकारको सय दिन अपेक्षा कम उपलब्धी स्थूल भनेका छन् । सरकारको एक कार्य धेरै भएको बताएका डा. भट्टराइले सामुहिक कार्य निकै कम भएको भन्दै ओली सरकारलाई सचेत गराएका छन् । यस्तो छ, डा. भट्टराइको ट्विट
सरकारको सय दिन-धेरै अपेक्षा, कम उपलब्धी!स्थूल कुरा धेरै, सूक्ष्म डेलिभरी कम! एकल कार्य धेरै, सामुहिक कार्य कम! अपेक्षा महान् छलांग, व्यवहारमा निरन्तरता! अपेक्षा डिस्टिंग्सन,प्राप्तांक पास! बजेटसम्म शंकाको लाभ!!
— Baburam Bhattarai (@brb1954) May 25, 2018
यसैबिच सत्तापक्षका नेताहरुले सरकारको १ सय दिन उपलब्धि मुलुक भनेका छन् भने विपक्षी दलले सरकारको १ सय दिन विसंगतिले भरिएको बताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको एक सय दिनको समीक्षा पनि गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको सय दिनलाई ‘सामान्य गति, दर्जन विसंगति’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले सार्वजनिक गरेको भिडियो विज्ञप्तिमा सरकारका विसंगतिको बारेमा जानकारी दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा भएकोमा प्रतिपक्षीको हैसियतले राम्रा कामलाई समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । नराम्रा कामको आलोचना र खबरदारी गर्दै सरकारका विसंगतिको बारेमा प्रवत्ता शर्माले जानकारी दिएका हुन् ।